ရန်ပိုင်| January 23, 2013 | Hits:3,293
| | ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှားပါးနေပြီဖြစ်ပြီး သမိုင်းအရ တန်ဖိုးကြီးသည့် စပစ်ဖိုင်းယား တိုက်လေယာဉ် (ဓာတ်ပုံ- ဗြိတိသျှ တော်ဝင် လေတပ်)
Nwar Kyaungthar January 24, 2013 - 1:11 am GET A REAL JOB.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 24, 2013 - 3:18 am Pirates of the Carribean ရုပ်ရှင်ထဲက Captain Jack Sparro ကို ခေါ်ပြီး ရှာ တူးခိုင်းလေ။
Reply အောင်မျိုးမြတ် January 24, 2013 - 4:43 pm မြန်မာတိုင်းရင်းသူရေ…မြန်မာလိုတစ်လုံးအင်္ဂလိပ်လိုတစ်လုံးမပြောပါနဲ့လား။ Caribbean ပါ..
Reply castle January 25, 2013 - 11:24 pm ကိုအောင်မျိုးမြတ်ရေသူများကိုဝေဖန်တာတော့မကောင်းပါဘူးဗျာ။ရှားပါးနေတဲ့uniquic ရှာရတာခကာတယ်လေ။